Sakafo anti-inflammatoire: mihinana hisorohana aretina ary hahatsapa ho tsara | Nutri Diet
Michael Serrano | | Vatsim-pivelomana
Reraka na marary kokoa ve ianao tato ho ato? Ny fanarahana ny sakafo fanoherana ny inflammatoire dia afaka manampy anao hahatsapa ho tsara kokoa. Ary ny fivontosana ve no mety mahatonga ny olana.
Manampy anao hihinana tsara kokoa koa ny sakafo fanoherana ny inflammatoiresatria izy io dia ahitana andiana fahazarana misakafo mahasalama. Manome toky anao izy ireo fa misy otrikaina mahasoa maro ary mitazona ireo izay mety hanimba, toy ny trans trans, any bay. Fantaro hoe inona izany ary ahoana ny fampiharana azy.
1 Inona no atao hoe sakafo fanoherana ny inflammatoire?
2 Ho an'iza ny sakafo fanoherana ny inflammatoire?
3 Sakafo avela
3.1 Voankazo sy legioma
3.2 Sakafo mahasalama
3.4 Voamaina iray manontolo
3.9 Sôkôlà mainty
4 Sakafo tokony hialana
4.1 Sakafo matavy
4.2 Sakafo efa voahodina sy mamy
Inona no atao hoe sakafo fanoherana ny inflammatoire?
Araka ny anarany, ity karazan-tsakafo ity dia drafitra fisakafoanana izay misy sakafo misy fananana manohitra ny fanaintainana. Ny sakafo miaraka amin'ireo fananana ireo dia heverina fa mampihena ny risika amin'ny aretina maro.
Betsaka ny antony hanomezana ny sakafonao fihodinan-tsiranoka. Ary io fivontosana maharitra io dia ao aorian'ny aretina maro. Ny fikarohana dia nampifandray ity olana ity amin'ny homamiadana, diabeta ary Alzheimer, ary koa aretim-po.
Ho an'iza ny sakafo fanoherana ny inflammatoire?
Ireo drafi-pisakafoanana ireo dia indrindra ho an'ireo izay mijaly amin'ny aretina izay miteraka fivontosana, toy ny rheumatoid arthritis. Ny fanovana ny fihinanana sakafo dia tsy manafoana ny olana mamaivay, saingy inoana fa afaka manamaivana ny soritr'aretiny izany, na amin'ny alàlan'ny fampihenana ny isan'ny flare-up na ny fihenan'ny haavon'ny fanaintainana.
Na izany aza, tsy ilaina ny mijaly amin'ny fivontosana maharitra mba hanarahana azy, fa kosa ny sakafo fanoherana ny inflammatoire dia mety amin'ny rehetra. Ary raisina ho safidy sakafo mahasalama tokoa izy io.
Amin'ny ankapobeny, ny sakafo fanoherana ny inflammatoire dia manolo-kevitra ny hihinana sakafo manontolo fa tsy sakafo voahodina. Nefa andao hojerentsika amin'ny antsipiriany ny sakafo rehetra avela ary iza amin'ireo no tokony harahina.
Voankazo sy legioma
Ny ankamaroan'ny sakafo dia tokony ho an'ireto vondrona roa ireto. Miloka amin'ny loko isan-karazany azo atao. Ohatra sasany ny voasary, voatabia ary anana maintso toy ny epinara na kale.
Anisan'izany tavy mahasalama toy ny menaka oliva, zavokà, kennel, na chia. Marihina fa ilaina ny mifehy ny habetsan'ireo sakafo ireo noho ny kaloria. Ohatra, ny voanjo dia manana tombony maro, fa ny fetrany dia vitsy isan'andro. Raha tsy izany, miangona ny tavy sy ny kaloria, mampitombo ny risika ho be loatra.
Ny sakafo fanoherana ny inflammato dia matetika ahitana trondro farafahakeliny indroa isan-kerinandro. Ny salmona, tuna ary sardine dia anisan'ny trondro tsara indrindra amin'izany. Ny antony dia manankarena asidra matavy omega 3 izy ireo, izay miady amin'ny fivontosana.
Voamaina iray manontolo
Ny serealy voadio dia soloina voa feno, izay, ankoatry ny mahavelona azy kokoa, dia afaka manampy amin'ny fivontosana. Ohatra, ny vary sy ny voam-bary manontolo dia nohanina fa tsy fotsy. Ho an'ny ampahany, oatmeal dia sakafo sakafo maraina lehibe.
Iray amin'ireo fototry ny sakafo mahasalama indrindra izy ireo, ary ny anti-inflammatoire dia tsy misy ankanavaka. Ny antony dia feno fonosana sy akora miady amin'ny inflammatoire.
Ny voaroy, blackberry, na manga dia manampy amin'ny ady amin'ny fivontosana. Ny tsiambaratelo dia ao amin'ilay akora manome azy ireo ny lokony.
Raha resaka zava-pisotro, dite fotsy sy dite maitso no tsara homarihina. Kaopy roa isan'andro dia afaka miady amin'ny fivontosana noho ny polyphenols. Ny divay mena koa dia heverina ho mahasoa amin'ny kely.
Turmerika, sakamalao, kanelina ary cayenne Izy ireo dia iray amin'ireo zava-manitra miaraka amin'ny fananana manohitra ny inflammatoire. Ny tongolo gasy dia mety hanampy amin'ny ady amin'ny fivontosana koa.
Noho ny vokatra manohitra ny inflammato ny kakao, avela ny sôkôla mainty (amin'ny antonony).
Sakafo tokony hialana
Satria izy ireo dia mety hiteraka vokatra mifanohitra amin'izany noho ny teo aloha (mifandray amin'ny fitomboan'ny fivontosana izy ireo), ny sakafo fanoherana ny inflammatoire dia tsy mamela anao hihinana ireto sakafo manaraka ireto:
Ny tavy trans dia mampiakatra ny LDL na ny kolesterola ratsy, miteraka fivontosana. Izy ireo dia hita ao amin'ny sakafo toy ny mofomamy indostrialy na fries frantsay. Mitadiava azy ireo amin'ny labels mitondra ny anarana hoe menaka hydrogenated. Ny tavy voky, hita ao amin'ny sakafo toy ny hena mena sy voahodina na pizza, dia tokony ferana ihany koa.
Amin'ny lafiny iray, ny fihoaram-pefy amin'ny sakafo nendasina dia miteraka lanjany be loatra sy matavy loatra ary koa fitomboan'ny fivontosana. Sorohy izany amin'ny alàlan'ny fampiasana menaka kely handrahoana sakafo. Omano izy ireo natsatsika, nendasina na notetehina. Raha resaka tavy ronono dia filokana 0 isan-jato no filokana.
Sakafo efa voahodina sy mamy
Amin'ny sakafo fanoherana ny inflammatoire anoroana hevitra izy mba hialana amin'ny zavatra tena voahodina na mamy. Ny fanararaotana azy ireo dia mampitombo ny fihoaran'ny lanjan'ny siramamy sy ny kolesterola ao anaty ra. Ary ireo olana rehetra ireo dia misy ifandraisany amin'ny fivontosana. Ohatra iray ny zava-pisotro mahery sy zava-pisotro mamy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo anti-inflammatoire
Fanatoranana voajanahary, Cloves